I-App epholileyo eneBalcony-nr.4
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOld Boatman'S House Bled
I-Old Boatman's House lishishini eliqhuba usapho, elinamagumbi amahlanu.
Ngokhuseleko ngexesha le-Covid-19, silungiselele inkqubo yokungena ngaphandle konxibelelwano. Sikwathathe amanyathelo awongezelelekileyo ukuqinisekisa ucoceko olufunekayo kunye nokubulala iintsholongwane.
Sizama ukunika iindwendwe zethu imfihlo abayidingayo, kodwa basoloko nje i-imeyile okanye umnxeba kude, ukuphendula imibuzo kunye neemfuno zabo. Sinikezela ngamagumbi asanda kulungiswa, ukuhlala kamnandi eBled.
Irhafu yabakhenkethi 3.13 € / abadala / ngosuku AYIBAndakanywe kwixabiso.
Indlu enkulu enegumbi elinye eBled. Ibekwe kumgangatho wesibini. Ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yebhanti kwigumbi lokuhlala ziyafumaneka ukuze zilale. Le ndlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela labucala elinomatshini wokuhlamba. Indlu ine-air conditioning. Ikwanebalcony apho ungonwabela ikofu kumoya omtsha.
isofa ekwayibhedi eyi-1, ibhedi ekhwele kwenye eyi-1
Indlu ibekwe kwindawo enoxolo nekhuselekileyo ecaleni kwethafa, kunye nendlela ekhokelela kumlambo iSava.
Kufutshane kukho ivenkile enkulu, ebizwa ngokuba yiMercator. Isikhululo sepetroli sikwakufuphi nendawo, ezinye iindawo zokutyela kunye neekhefi zikumgama oyi-200m ekufikelelo kuzo kunye neziko labakhenkethi i-Triglavska Roža, apho iindwendwe zinokufumana lonke ulwazi malunga neBled kunye nezinye iindawo ezifanele ukutyelelwa.
ICEBISO: Malunga ne-400m kude nayo yeyona ndawo yokubhaka imangalisayo, ebizwa ngokuba yiHitri Kruhek. Kuya kufuneka uhambe :)
Umbuki zindwendwe ngu- Old Boatman'S House Bled
These apartments are a part of a family business. We love to meet new people and share our experiences and recommendations with our guests. Looking forward to meeting you and hear your story! :)
Saqala ukusingatha ngo-2008, sinezindlu ezincinci ezine kwindawo yaseBled ebizwa ngokuba yiMlino.
Kuba siyakuthanda ukusebenza nabantu kunye nokudibana neendwendwe zethu, siye sakhula kuyo yonke le minyaka kwaye ngoku sinamagumbi ali-11 kwiindawo ezimbini ezahlukeneyo eBled-eyona ndawo intle eMhlabeni :)
Abasebenzi bethu basebenza nzima ukunika iindwendwe zethu indawo eyonwabisayo, epholileyo kunye neyokuphumla.
Siyakuthanda ukuva izimvo zabo kwaye iindlebe zethu zihlala zivulekile kwiingcebiso zabo malunga nendlela yokwenza amava abengcono ngakumbi! :)
Ukhuseleko ngexesha le-Covid-19, silungiselele inkqubo yokungena ngaphandle koqhagamshelwano. Sikwathathe amanyathelo awongezelelekileyo ukuqinisekisa ucoceko olufunekayo kunye nokubulala iintsholongwane.
Kuba siyakuthanda ukusebenza nabantu kunye nokudibana neendwendwe zethu…
UOld Boatman'S House Bled yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bled